ရခိုင် သွေးချင်းများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လက်ဆောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ရခိုင် သွေးချင်းများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လက်ဆောင်
ရခိုင် သွေးချင်းများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လက်ဆောင်
Posted by ကထူးဆန်း on Jun 10, 2012 in Community & Society, Editor's Choice, Events/Fundraise | 110 comments
မန္တလေးမှ လှုဒါန်းလိုသူများအတွက် လေးပေါက်မှ ကောက်ခံပေးပါ့မယ်ခင်ဗျ။လေးပေါက်မှ အခုလို အကြောင်းပြန်ပေးလာပါတယ်။
မန်းလေးမြို့နဲ့ပါတ်ဝန်းကျင်ကလှူဒါန်းလိုသူများအတွက် ကျနော်က တာဝန်ယူပြီးကောက်ခံပေးပါမယ်။
ကောက်ခံလို့ရတဲ့ ငွေကို ရွာထဲမှာကြေငြာ စာရင်းပြုစုပြီးရင်သက်ဆိုင်သူဆီပြန်လည်ပို့ပေးပါမယ်။
09-680-5396 ကိုသာ ဆက်သွယ်ပါခင်ဗျာ
လောလောဆယ် နုတ်ကတိရထားသည့် စာရင်း။
၁။ Foreign Resident .. ငါးသိန်း
၂။ ဦးဦးပါလေရာ .. တစ်သိန်း
၃။ ဘဘဘလက်ချော .. ငါးသောင်း
၄။ ထူးဆန်း .. တစ်သိန်း
၅။ Ye Yint Hlaing .. တစ်သိန်း
၆။ May Flower .. ငါးသောင်း
၇။ Hnin Phyu .. တစ်သိန်း
၈။ Padonmar .. တစ်သိန်း
၉။ ရွှေမင်းသား .. ငါးသောင်း
၁၀။ komingalar .. တစ်သိန်း
၁၁။ Thihayarzar .. ငါးသောင်း
၁၂။ Shwe tallart .. တစ်သိန်း … စုစုပေါင်းနုတ်ကတိ .. ၁၄ သိန်းရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့ 12.6.2011 ..
၁။ ကိုလွင်အောင် … ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် တစ်သိန်း)
၂။ ဒေါ် Aye .KK .. ၅၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် ငါးသောင်း)
၃။ ကိုကြောင်လေး .. ၅၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် ငါးသောင်း)
၄။ မအိ …. ၅၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် ငါးသောင်း)
၅။ ကိုမြင့်စိုးလတ် … ၂၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် နှစ်သောင်း)
ကိုနိုဇိုမိက သုံးသောင်းထည့်ဝင်ပါမည်ဆိုသည့် အကြောင်း ဘဘဘလက်မှ သတင်းပေးပို့လာပါသည်။
ကျွန်တော်မန္တလေးကို နေ့တိုင်းလိုလို ရောက်ဖြစ်တာမို့ ကျွန်တော်လာခဲ့ပါ့မယ်။
ဒါပေမယ့် လေးပေါက် ဘီယာတိုက်ရမယ်။ ok ?။
ကြိုဆိုပါတယ် ကိုမင်းဇော်ရေ ကျနော်လည်း mandalay ကပါ။
လာခဲ.လျှင် ဘီယာမတိုက်နိုင်သော်ငြား ရေခဲရေနှင်.၀မ်းနှုတ်ဆေးတော.ကျွေးနိုင်ပါဂျောင်း။
အခုလို ကွန်မင့်လေးနဲ့ ၀င်အားပေးတာလဲ တတပ်တအားပါပဲ…
ဒီအလှူမှာ စိတ်ဓါတ်နဲ့/ထောက်ခံအားပေးမှု့နဲ့ ပါဝင်တယ်လိုပဲ မှတ်ယူပါတယ်ဗျာ…
အစိုးရ ကိုယ်စား လက်ခံပေးနေတဲ့ ၊
မီးသတ် ဦးစီး ဋ္ဌာန ကိုလှူလိုက်ရင် ဘယ်လိုလဲ ။
အစိုးရက စစ်တွေမှာ ဘင်္ဂါလီတွေအတွက်လည်း ၊
ဒုက္ခသည် စခန်းတစ်ခုဖွင့်ထားတယ်ပြောတယ် ။
အဲတော့ အစိုးရ မီးသတ် ဦးစီး ဋ္ဌာန ကိုလှူလိုက်ရင် ၊
ဘာ လူမျိုးတွေ ၊ ညာ လူမျိုးတွေ ၊
ဘာ ဘာသာ တွေ ၊ ညာ ဘာသာ တွေ ၊
ပြောစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့ ။
နားညီး တော်တော် သက်သာသွားမယ် ။
ရွာသူားတွေ ဆုံးဖြတ်ကြပါ ။
ကို Black ရယ် စိတ်မဆိုးပါနှင့် ။
အဘ လည်း အဆင်လေးများ ပြေမလားလို့ ၊
ကဲ ၊ ကဲ ၊
အဘရဲ့ ဒီအကြံကို ပြန် ရုတ်သိမ်းပါတယ်ကွယ် ။
ဘဖောရေ .. ကျွန်တော်တို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ပြောတာနဲ့ေ၀၀ါးမသွားပါနဲ့ ။ အာရုံတွေ အနောက်မခံလိုက်ပါနဲ့လား ။
Target Date က ၃၀ ရက်နေ့မို့ အဲ့ဒီ့ နေ့ နားမှာ နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အလှုရှင်တွေရဲ့ ရင်တွင်းကဖြစ်စေချင်တာကို အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် အကောင်အထည်ဖော်ကြတာပေါ့ ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကို htoosan ရယ် ။
အဘ ကို ခွင့်လွှတ်ပါကွယ် ။
ကဲ ၊ ကဲ ။
မင်းကြားတဲ့ ၊ မြင်တဲ့ အတိုင်းပဲ ။
အဘ တောင် တောင်းပန်နေရပြီ ။
မျိုးချစ်စိတ်တွေက သိပ်နိုးကြားနေကြတဲ့ ၊
အချိန် နှင့် အခြေအနေ ကို ရောက်နေတယ် ။
အဲတော့ မင်း လက်လျှော့လိုက်တော့ ။
ကဲ ၊ သူကြီးမင်း ကော ဘာများပြောချင်သေးသတုန်း ။
လှူနေကြပြီ… သူများတွေ လှူနေကြပြီ..
အင်း ကိုဟိန်းလတ်ရေ ရေခဲရေတော့ တိုက်ပါ။ ဝမ်းနှုတ်ဆေးတော့ မတိုက်ပါနဲ့။ မိုးတွေရွာနေတယ်ဗျ။
ဟီး ။။ ကိုဟိန်းလတ် မတိုက်လဲ ကျွန်တော် တိုက်မယ်ဗျာ။ လေးပေါက်ရယ် ကိုဟိန်းလတ်ရယ် မန္တလေးက
ရွာသားတွေရယ် ကျွန်တော်ရယ် ဆုံကြမယ်ဗျာ။ မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်ပေါ့။ ok,?
ကြည့်ရင်းနဲ့ မျက်စိလည်သွားတာလား ကွန်မန်း မတက်တာလား တော့ မသိတော့ဘူး။
ဆူး က နေ တဆင့် လှူပေးချင်တဲ့ အလှူရှင်များလည်း ဆူး ကို ဆက်သွယ်လို့ ရပါတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း အတိအလင်းကြေညာပေးပါတယ်နော်။
ကျေးဇူးပါ ဆူးရေ ။
သူကြီး သတင်းစာ အတွက် အလုပ်တွေရှုပ်နေတယ်ထင်တယ် ။ ရွာထဲဝင်တာ မတွေ့မိဘူး။
သူ ငွေကောက်ခံရမှု့မှတ်တမ်း sticky မလုပ်ပေးနိုင်ခင် အများမြင်အောင် ဒီမှာလည်း update လုပ်သွားပါ့မယ်။
strong>11-6-2011 တွင် စတင်ကောက်ခံရရှိငွေ
၁။ ကိုထွန်းလင်း .. ၅၀၀၀၀ ကျပ် ( ကျပ် ငါးသောင်း) (ကိုရွာစားကျော် နေပြည်တော်)
၂။ ဦးဦးပါလေရာ .. ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် ( ကျပ် တစ်သိန်း)
၃။ ထူးဆန်း .. ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် ( ကျပ် တစ်သိန်း)
၄။ မရွှေကြည် … ၂၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် နှစ်သောင်း)
အလှုငွေပို့တာ ကျွန်တော်တို့ လက်ဝယ် မရောက်သေးလို့ဆိုပြီး စိတ်ပူနေတဲ့ ကိုရဲရင့်လှိုင်ရေ .စိတ်ပူနေမှာစိုးလို့ ။ မနက်ဖြန် သွားယူဖို့ ချိန်းထားပြီးသားဆိုတာလေး အသိပေးပါရစေ။
လှူတဲ့လူတွေ အတွက် သာဓု သာဓု သာဓု ပါဗျာ.. ကိုယ်တိုင် မလှူနိုင်လို့ သာဓုပဲ ခေါ်လိုက်တယ်…
မနေ့ က SKYNET ကပြသွားတဲ့
ရခိုင် နဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တို့ ဆွေးနွေးပွဲ လေးကို အထူးကြိုဆိုပါတယ်။
လက်ချင်းချိတ်ပြီး ဓါတ်ပုံ ရိုက်ထားတဲ့ ပြကွက်က ကျက်သရေအရှိဆုံးပဲ။
ကျေးဇူးပါ eipu ရေ ။ နည်းတယ် များတယ် မဟုတ်ပါ ။ အားလုံးဝိုင်းဝန်းတာပါဘဲ ။ အနီးစပ်ဆုံးတစ်ဦးဆီသာ ဖုန်းဆက် ဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်။